Advertising ကြော်ငြာ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အမျိုးအစား: Advertising ကြော်ငြာ
အသံကျယ်အမှတ်တံဆိပ်အမည်များ: rating ။ လူကြိုက်များအမှတ်တံဆိပ်နှင့်၎င်းတို့၏အမှတ်တံဆိပ်
အပေါ် Posted 15.09.2019 15.09.2019
ယနေ့အထိ, လူသိများတဲ့အမှတ်တံဆိပ်အမည်များကိုလူတိုင်း၏နှုတ်ခမ်းပေါ်ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုရန်အသုံးပြုရနှင့်ဤအမည်များကိုတစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ချိန်ကသူတို့ကိုနောက်ကွယ်ကကြောင်းနှင့်အတူတက် လာ. ဆိုတဲ့အချက်ကိုစဉ်းစားကြဘူး ...
ရော်နယ်အောင်နိုင်မက်ဒေါ်နယ် - မက်ဒေါ်နယ်၏ Mascot
ရော်နယ်အောင်နိုင်မက်ဒေါ်နယ်ကားအဘယ်သူနည်း ကမ္ဘာကျော်ကုမ္ပဏီမက်ဒေါ်နယ်၏ mascot သူသည်ဤအလူရွှင်တော်။ 2001 အတွက်ကောက်ယူသုတေသနအဆိုအရ, ဤစာအုပ်၏စာရေးသူ« Fast Food Nation »ရော်နယ်အောင်နိုင်မက်ဒေါ်နယ် (ဓါတ်ပုံကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ) အလွန်ဖြစ်ပါတယ် ...
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လမ်းညွှန် - တစ်ဦး ... တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်စာအုပ် Creating ။ အမှတ်တံဆိပ်စာအုပ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ
အပေါ် Posted 15.09.2019 09.11.2019
ဘုံကော်ပိုရိတ်ဝိသေသလက္ခဏာဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏အရေးပါမှုကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များပိုမိုနားလည်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ၏ကော်ပိုရိတ်သင်္ကေတများ, အရောင်များ, အမှတ်တံဆိပ်၏အသိအမှတ်ပြုမှုကိုမှန်ကန်အမြတ်အစွန်းတတ်၏။ အမှုအပေါ်မှီခိုဖို့မပြုလုပ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အားလုံးလေ့လာဖို့လိုအပ် ...
Retargeting - ကဘာလဲ? retargeting အမျိုးအစားများ
ဒါဟာထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုမှုကိုအပြီးအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဆိုက်တစ်ခုအလည်အပတ်ခရီးအင်တာနက်ပေါ်တွင်ပြီးနောက်, အသုံးပြုသူကြည့်ရှုအားပေးကြသည်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအဲဒီမှာကြော်ငြာကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ ကစဉ်းစားသည်နှင့်အမျှ: တစ်တိုက်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု? အဘယ်သူမျှမ ...
အပေါ် Posted 15.09.2019 23.11.2019
နေ့တိုင်းလူတွေသူတို့ရဲ့အလုပ်နှင့်ဘဝပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရေး, နာရီအနည်းငယ်များအတွက်အင်တာနက်ပေါ်ရှိဖြုန်းနေကြတယ်။ အဆိုပါပရိသတ်ကိုအဆက်မပြတ်နှစ်ဦးစလုံး quantitative နှင့်သှေး, ကြီးထွားလာနေသည်: ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များ, မြင့်မားတဲ့ဝင်ငွေနှင့်အတူရင့်ကျက်သောလူ ...
လူအစုအဝေးထဲကနေထွက်မတ်တပ်ရပ်အမြဲချင်တယ်။ မည်သို့ပင်ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်ရာသီနှင့်ရာသီဥတု၏စတိုင်ကိုကြည့်ဖို့အလိုဆန္ဒလည်းမရှိ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ငါမသာ, ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းချင်ခဲ့ကြ ...
ဒီဇိုင်း - ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်အတွင်းလူကြိုက်အများဆုံးကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူကားအဘယ်သူ့ကိုလေးနက်သော site ကို developer များအနေဖြင့်စတင်တစ်ဦးဒီဇိုင်နာသူတို့ကိုယ်သူတို့မခေါ်နဲ့ပုံမှန်အတိုင်းနောက်ပြီးနှင့်အတူအဆုံးသတ်ကြပါဘူး။ သို့သျောထိုအရှိဆုံး ...
အပေါ် Posted 27.08.2019
အသစ်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းပညာထွန်းထုတ်၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏နယ်ပယ်ကျယ်ပြန့်စေသည်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွင်သူတော်ကောင်းတရားပုံနှိပ်ခြင်းမှထုတ်ကုန်ပေါ်မှပုံရိပ်ကိုဆွဲထဲမှာပါဝင်ပါသည်ရာ၏အနှစ်သာရကိုထုတ်အတိုကောက် ...
PR စနစ် SAMP ဆာဗာ: ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်
အပေါ် Posted 19.08.2019
မကြာခင်အစောပိုင်းသို့မဟုတ်နောက်မှ၊ “ GTA server ကိုဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ - SAMP?” ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအစပြုသူ server server အားလုံးစိတ်ဝင်စားသည်။ SAMP server ၏ PR ကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးကတော့ ...
အပေါ် Posted 13.06.2019
Photoshop ကိုသို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်လက်အတွက်ပိုစတာအောင်ဘယ်လိုနေသလဲ? ဘယ်ကိုအသုံးပြုရန်နည်းလမ်း? ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရွေးချယ်စရာများမှာအသေးစိတ်ကြည့်ကြ, ပြီးတော့သင်ကသူ့ကိုရန်သင့်လျော်သောရွေးချယ်နိုင်သည်။ အများဆုံးမကြာခဏ Photoshop မှာပိုစတာအောင်လုပ်နည်း ...
အဘယ်အရာကို Flyer ၏အောင်မြင်မှုကိုဆုံးဖြတ်သည်? ရှုထောင့်လက်ကမ်းကြော်ငြာ, ဒီဇိုင်း, စောင့်ကြည့်မှု
ဒီနေ့လမ်းပေါ်ထွက်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်မြေအောက်လူကိုအနီးရပ်နေသိကောင်းစရာများလက်နှင့်လက်ကမ်းကြော်ငြာတစ်စောင်ယူကမ်းလှမ်းမှုကိုရှောင်ရှားဖို့လုံလောက်တဲ့ခက်ခဲသည်။ ဒါဟာစနစ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် - မှ, ဥပမာ, အိမ်ပြန် ...
logo သမိုင်း။ logo "BMW ကား", "Skoda", "Audi ကား", "Toyota က", "Adidas": အများ၏သမိုင်းကဘာလဲ
အားလုံးရုပ်မြင်သံကြားပေါ်မှာရောင်စုံကြော်ငြာများဒါမှမဟုတ်မြို့ရဲ့လမ်းများပေါ်တွင်ဆွဲထား variegated ပရိုမိုးရှင်းပိုစတာမှတဆင့်သင်ယူသိကြလိမ့်မည်ဟုအလွန်နည်းပါးအမှတ်တံဆိပ်ရှိပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအမှတ်တံဆိပ်သဘောတူသည်။ အဘယ်မှာ "လိုဂို" ၏ပုံပြင်ကိုစတင် ...
CPM - အဲဒါဘာလဲ။ ကြော်ငြာတွင် CPM ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲ။
ကွန်ယက်ပေါ်တွင်မီဒီယာနှင့်ဆက်စပ်ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုစည်းရုံးရေးအသုံးပြုပုံဆိုကြော်ငြာင်း၏ခန့်မှန်းဘတ်ဂျက်တွက်ချက်။ ဖောက်သည်ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုကရန်ပုံငွေခန့်အပ်ကုန်နေသည်ရှိမရှိအပေါ်၎င်း၏အကောင်အထည်ဖော်ရန်ခွဲဝေပုံကိုကြည့်ရှုရန်အရေးကြီးပါသည် ...
Flyer ရဲ့အကောင်းဆုံးနမူနာကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို။ စည်းကမ်းများနှင့်သိကောင်းစရာများ
လက်ကမ်းကြော်ငြာတစ်စောင်သည်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်စျေးသိပ်မကြီးသော၊ ၎င်းသည်စားသုံးသူအတွက်ကြော်ငြာနှင့်သတင်းအချက်အလက်နှစ်ခုလုံးကိုလုပ်ဆောင်သည်။ နှင့်တိုးတက်မှုများအတွက်လိုအပ်ချက်ရှိခဲ့လျှင် ...
မိမိလက်နှင့် LED scrolling စာသားကို: လမ်းညွှန်မှုများထုတ်လုပ်မှုများအတွက်
သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောရောင်စုံမိုဘိုင်းကြော်ငြာအများကြီးန်းကျင်ကိုကြည့်ပါ။ အဆောက်အဦးများ, လမ်းဘေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်, ပြတင်းပေါက်များ, ရုံးခန်းများနှင့်ကဖေးပေါ်မှာတည် ထား. , အချို့ကားပြတင်းပေါက်အပေါ်တိုက်ရိုက်ပူးတွဲ။ ဒါဟာအားလုံးမူတည် ...
logo: အမှတ်တံဆိပ်အမျိုးအစားများ။ ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်။ လိုဂိုဖန်တီးမှု
မည်သည့်ကုမ္ပဏီ၏လှုပ်ရှားမှုများကော်ပိုရိတ်ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ဖန်တီးမှု, ဒီဇိုင်းကိုပြောပြတယ်အဆိုပါလိုဂို၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းနှင့်အတူစတင်သည်။ ဒါဟာအဆိုပါအထိမ်းအမှတ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု၏ဆက်နွယ်မှုကိုပြသထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်င်း၏အယူအဆဖော်ပြပေးခြင်းနှင့် ...
အောင်မြင်စွာကကုန်သွယ်ရေး, အမျိုးမျိုးသောန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုသည်ဖြစ်စေ, သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားနိုင်ဖို့အတွက်ကမှတ်မိစေခြင်းငှါ၎င်းထိုသို့မြှင့်တင်ရန်အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ပေသည်။ နှင့်ဤပြဿနာအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြော်ငြာပါဝင်သည်။ ဒါဟာသူမဖြစ်ခဲ့သည် ...
ယနေ့ခေတ်ကြော်ငြာနေ့စဉ်အသက်တာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာနေရာတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုအတူ: အလမ်းအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့, တီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်, အသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်, မြို့တဝိုက်လမ်းလျှောက်နေစဉ်။ ကြော်ငြာတစ်ခုမှာအမျိုးအစား ...
ယနေ့ပရိုမို” ရှေ့ဆက်သည်ခေတ်သစ်လူသား၏နေ့စဉ်ဘဝကိုခိုင်မြဲစွာဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ နှစ်ဖက်စလုံးမှကျွန်ုပ်တို့သည်“ မြှင့်တင်ရေး”၊ “ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအဝတ်အစား”၊ “ မြှင့်တင်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ”၊ “ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအမှတ်တရပစ္စည်းများ”၊ “ မြှင့်တင်ရေးဗီဒီယိုများ”၊ “ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကုဒ်များ” ကိုအစဉ်မပြတ်ကြားရသည်။
ခေါက် - ကဘာလဲ? သတင်းအချက်အလက်နည်းနည်း
"ခေါက်" ၏အယူအဆ "groove", "ဖွညျးညှငျးစှာရလြှောဆငျးခွငျး" အဖြစ်ဘာသာဂျာမန်စကားလုံးက "ခေါက်" မှအစပြု။ အဆိုပါအယူအဆမပြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကားမှာပေါ်ဖမ်းမိ။ ထိုကဲ့သို့သောဘရိုရှာအဖြစ်အရွက်စာပမြေား, ခေါက်များထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြု ...
17 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,411 စက္ကန့်ကျော် Generate ။